23 African fashion ideas | african fashion, african fashion dresses, african traditional dresses
Collection by Kearabetswe
viscoc velvet Blue Colored Partywear Embroidered Taffeta Silk Mix Lehenga Choli
Langha: viscoc velvet with emrodery work Choli :viscos with emrodery work Dupatta :net Everyone will admire you when you wear this clad to elegant affairs. Be ready to slip in the comfort zone of pleasant green lehenga choli. The lehenga is beautified with sequence thread work. The choli is made of banglory silk. T
Kente StylesShort African DressesAfrican Print Dresses
Myanmar WomenMyanmar Traditional DressAfrican Fashion Dresses
Beautiful Asian GirlsBlouse Designs
"ရွှေလွန်းလိပ်ပြာ" အတွက် ကြော်ငြာဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးပေးခဲ့တဲ့ မိုး၊ အိမ်စည်၊ မေ၊ ပိုးမမှီသာ
"ရွှေလွန်းလိပ်ပြာ" ရဲ့ အသစ်ထွက်ရှိ မယ့် Design အတွက် သရုပ်ဆောင် မိုးဟေကို၊ ရွှေအိမ်စည်၊ မေမြင့်မိုရ် နှင့် ပိုးမမှီသာ တို့က အောက်တိုဘာလ (၁၈) ရက်၊ ရန်ကုန်၊ Charitum Hotel မှာ ကြော်ငြာ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးပေးခဲ့ပါတယ်။ By - MyanmarCelebrity "ဒီနေ့ Pandora ကနေ ရွှေလွန်းလိပ်ပြာ အတွက် ၀တ်စုံ (၅) စုံ ရိုက်တယ်။ (၁) ရက်လောက်ပဲ အချိန်ပေးရတာမို့ ရိုက်ဖြစ်တာပါ။ မြန်မာ ၀တ်စုံ (၅) စုံက မတူတဲ့ ပုံစံလေးတွေမို့ သဘောကျတယ်" လို့ MC ကို ပြောပါတယ်။ #MoeHayKo "ကိုယ်တိုင်က မြန်မာဝတ်စုံ သိပ်မ၀တ်ဖြစ်ဘူး။ ၀တ်ဖြစ်ရင်လည်း…